Sidee maalqabeen ku noqon kartaa? raac 10 qodob | Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Sidee maalqabeen ku noqon kartaa? raac 10 qodob
Aayaha editor Send an email December 2, 2020
Jeff Bezos Higsiga kuma koobnayn oo kali ah hal-abuurka ganacsiga, ee waxay ahayd mid ku saabsan waxyaabihii uu daneynayay”.
Balse su’aashu waxay tahay sidee ayuu Bezos hormarkan ku gaarsiiyay shirkadda?
1. Dhibaato kasta xal ayay leedahay marka laga fikiro hal-abuurna lala yimaado
Bezos, markii uu yaraa wuxuu aamin sanaa aragtida la xiriirta awoodda hal-abuurka.
Waxaa uu xilliyada xagaaga, waqti la soo qaadan jiray awowgii oo ku nool tuula yar oo ku taalla gobolka Texas, Waxaa uuna xilligaa hagaajin jiray wax walba oo farsameyn iyo hal-abuur u baahan.
Awoowgii ayaa mar waxaa lacag badan looga qaatay hal-abuurka arrimaha casriga ah, ka dib markii uu shil gaari uu galay, uuna ku waayay suulkiisa. Wuxuu galay qalliin loogu sameeyay suul macmal ah iyadoo la adeegsanayo qaab casri ah.
Waa sheekadan midda uu ilaa maanta ka sheekeeyo Bezos.
2. Qofka macmiilka ayaa mar walba saxan
Tom Alberg ayaa ku tilmaamay agaasimihii hore ee shirkadda Amazon, Mr Bezos “mid u dhashay sida loola dhaqmo macaamiisha”.
Wuxuu intaa ku daray: “Wuxuu donayaa in caalamka uu wax ka badalo, waxayna maskaxdiisa mar walba ku xiran tahay qancinta macaamiisha. Haddii aad lacag sameysid wax badan ayaad qaban kartaa.”
3. Dib u laabo ka dibna horey isu ballaari
Sunil Gupta, oo ah macllin dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Harvard, ayaa hal-abuurka Amazon ku tilmaamay wax soo saar cusub iyo adeeg uu ku qeexay “dib u noqo ka dib-na horey isu ballaari,” taasoo uu ku micneeyay in dib loo laabto oo la darso waxyaabihii sababay dhibaatooyiinka ay wajaheyso Shirkadda, ka dib-na horey loo socdo.
Waxay arrintani micnaheedu yahay in shirkadad Amazon ay ka fikirto waxa ay macaamiisheeda rabaan ka dib-na ay ka shaqeyso sidii ay u heli lahaayeen.
Sawir hore oo Jeff Bezos ah
4. Mar walba waa maalinta ugu horeysa
Warbixin kasta oo sannadle ah oo ay soo saarto shirkadda Amazon, waxaa lagu soo daraa nuqul ka mid ah warqaddii ugu horeysay ee dadkii shirkada saamiga ku lahaa.
5. Ka awood badi
Markii ay sida xowliga ah ku bilowdeen bogagga internet-ka, sannadkii 2000, oo amnigoodana uu halis ku jiray, Bezos wuxuu u bareeray halista wuxuuna Amazon u furay dad kale oo dibadda ah oo maalgashan kara. Waxay ahayd tallaabo lama filaan ah, wuuna ku faa’iday.
Meelaha uusan guulaha waaweyn ka gaarin waxaa ka mid ah in uu galay ganacsiga mobile-lada. Sikastaba, sida Bezos u aaminsan yahay in halista loo bareero waa mid aad u xoog badan.
Sidoo kale, Caadi ayay la tahay in uu isaga haro mashaariicda qaar, uuna ku daro waxyaabaha uu khibradda u soo yeeshay.
John Rosman, oo horey Amazon uga ahaa madaxa fulinta iyo qoraaga The Amazone Way, wuxuu sheegay in Jeff Bezos “uusan dan ka lahayn in uu gaaro go’aan uusan garaneyn meesha uu ku socdo iyo halka lagu gaari karo,” waxaana tusaale u ah Teknolojiyadda Alexa.
Calaamada shirkadda Amazon
6. Guuldarada waa waddada guusha
Mashaariicda aysan ka muuqan natiijo wanaagsan ma ahan oo kaliya mid qeexeya sida Bezos uu ugu bareerayo khatarta, balse waa mid muujinaysa go’aanka uu ka qaato guuldarada.
7. Waliga ha ka qoomameynin wax aad isku day’day
In guuldarada aanan ka cabsan waxay barbar socotaa in guuldarada aadan ka qoomameyn.
Bezos ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan arrintan, mar uu dod la galay Matthias Dobfner, oo ah madaxa shirkadda wax daabacda ee Axel Springer.
8. Muuji Fikirkaaga
Ninka wax ka qoray Bezos, Brad Stone wuxuu rumeysan yahay in madaxa shirkadda Amazon uusan dimuqraadiyadda aaminsanayn, marka ay timaado in go’aanka ugu dambeya la qaato xilliyada la fadhiyo shirka guddiga fulinta ee shirkadda, haddana wuxuu Bezos sidoo kale aminsan yahay in ay wanaagsan tahay in la yeesho dood daacadnimo ku dhisan.
John Rosman ayaa rumeysan in shirkadda Amazon ay arrintan kaga duwan tahay shirkadaha kale ee la midka ah.
9. qeyb ka noqo tartan
Bezos waxaa uu tartan adag kula jiraa shirkado. Wuxuu Brad Stone tusaale u soo qaatay shirkadda teknolojiyadda ee Alexa.
Waxay u muuqatay in markii shirkadda Apple ay sameysay barnaamijka Siri, in shirkadda Google na ay noqon karto mid leh cod wax walba qeexaya.
Ugaar Ah Ragga: Astaamaha Gabadha Aanan Abaar Iyo Aaran Kaa Tagi Doonin
Wax Ka Ogoow Qeylada Iyo Dhibaatooyinka Ay Caruurta U Geysato
Aqriso Qoraalka Heesta Dahraan ee Fannaanka Maxamuud Royal (Ka Bogasho Wacan)